Maamulka Degmada Qardho iyo kan Gobolka Karkaar ayaa gubay hoggo laga samaynayay dhuxul. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maamulka Degmada Qardho iyo kan Gobolka Karkaar ayaa gubay hoggo laga samaynayay dhuxul.
September 17, 2019 - By: Mohamud Nadif
Ciidamada Amaanka Degmada Qardho ayaa ku guuleystay in ay gubaan hoggo dhuxul laga samaynayay oo ku yaala duleedka degmada Qardho, hoggahaan ayaa aha kuwa laga sameeyay goobo qarsoon oo ku yaal qararka ku hareeraysan degmada Qardho, kormeer ay samaynayeen ciidamadu ayaa lagu qabtay agab iyo waxyaabo ay isticmaalayaan dhuxulaysatadu, ragii ku hawlanaa dhuxushaan ayaa iyagu goobta ka baxsaday.
Cumar Hiirad Kaatun Taliyaha Ciidamada Booliska Degmada Qardho oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in dadaal ay sameeyeen ciidamadu lagu guuleystay baabi’inta hoggaha dhuxusha, sidoo kale waxa shacabka iyo dadka reer guuraaga ah ka codsaday in ay la shaqeeyaan, Taliye Cumar waxa uu sheegay in lagu raadjoogo rag lagu tuhunsanyahay in ay dhuxushaan samaynayeen.
Duqa Degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan waxa uu sheegay in ay dagaal adag la galeen ka ganacsiga dhuxusha iyo gubideedana, waxa uu sheegay in dawlada ay ka go’antahay sidii loo cirib tiri lahaa dadka ku mashquulsan gubista dhirta iyo nabaadguurinta dhulka deegaanka ah.
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye waxa uu haweenka maalgelinaya dhuxulaystada ku booriyay in ay ka dhawrsoonaadaan baabi’anta iyo dhibaataynta deegaanka, Waxa uu sheegay in dawladu ay sharcia marsiin doonto cidii lagu helo samaynta dhuxusha.